Ny Tsimihety na Antandroña dia vondrom-poko any amin' ny faritra avaratra amin' i Madagasikara, ao amin' ny faritanin' i Mahajanga, hodidinin' ny tan' ny Antakarana avy ao avaratra, ny Betsimisaraka avy ao atsinanana, ny Sihanaka avy ao atsimo ary ny Sakalava avy ao andrefana. Antsohihy, i Mandritsara, i Befandriana-Avaratra, i Mampikony, i Boriziny ary i Bealanana no tena tanàn-dehibe onenan'ny foko Tsimihety.
Tamin' ny vaninandro faha mpanjaka dia tsy nahafantatra ny fisian' ny andriana sy ny tsy andriana ny Tsimihety fa mitovy saranga sy zo avokoa ny mponina rehetra ao amin' io foko io ka ny zokiolona no mitondra ny fiarahamonina.
Ny anaran' izy ireo dia midika hoe "ireo izay tsy manapa-bolo mihitsy", fihetsika azo inoana fa mifandray amin' ny fahaleovantenany tamin' ny Fanjakana Sakalava any andrefany, izay antenaina hanapaka volo amin' ny fotoana fisaonana. Hita any amin' ny faritra be tendrombohitra amin' ny Nosy izy ireo. Iray amin' ireo foko malagasy lehibe indrindra izy ireo ary eo anelanelan' ny 700 000 sy 1,2 tapitrisa mahery ny isany. Io fanombanana io dia mametraka azy ireo ho foko fahaefatra lehibe indrindra eto Madagasikara.
1 Ny maha izy azy ny Tsimihety
2.1 Ny vahoaka tsimihety
Ny maha izy azy ny TsimihetyHanova
Any amin' ny morontsiraka atsinanana no niavian' ny Tsimihety, rehefa nifindra monina niaraka tamin' ny ombiny tany amin' ny lemak' i Mandritsara tamin' ny taonjato faha-18 izy izay mpitsoa-ponenana tsy nisy mpitarika, nandositra ny adin' ny andevo tany an-tanindrazany. Fotoana fohy taorian' izay, dia nanaiky ny fitondran' ny Volafotsy, foko iray niaraka tamin' ny Maroserana izay nifindra monina nianavaratra avy tao amin' ny tanin' ny Sakalava. Peter Wilson – profesora momba ny antrôpôlôjia manokana momba an' i Madagasikara, dia nilaza fa tsy mifanaraka amin' ny fiheveran' ny antrôpôlôga mahazatra ny Tsimihety, satria "amin' ny tsy namorona marika na fombafomba na fitsipika maha fokom-pirenena" toy ny fanaon' ny fokom-pirenena maro ireo olona ireo, fa "faritana miiba" amin' ny zavatra tsy nataony sy tsy ataony izy. Noho izany dia tsy fokom-pirenena izy ireo, satria tsy manana fifamatorana maha fokom-pirenena, tsy manana firaisankina ara-tsôsialy ary tsy manana rafi-pahefana ao anatin' ny vondrom-poko. Ny fifandraisan' izy ireo dia mifototra amin' ny fianakaviana sy fihavanany ara-biôlôjia.
Nanjaka teo amin' ny Tsimihety ny tsy fisian' ny fitondrana ara-pôllitika tapahin' olon-tokana talohan' ny taonjato faha-19, izay misy mihevitra fa fanjakan' i Baroa. Tamin' ny taona 1823 anefa, Radama I, mpanjakan' ny Merina, dia nitondra ny ampahany be amin' ny Nosy ho eo ambanin' ny fanapahany, anisan' izany ny Tsimihety, sady nanafoana ny varotra andevo iraisam-pirenena.
Ny Tsimihety dia nametraka rafitra ara-pôlitika tany am-boalohany izay tsy nananan' ny mpanjaka toerana. Io no hany foko tsy mbola notantanana sy natolotra ny fahefan' ny mpanjaka. Mahafeno fepetra hantsoina amin' ny teny hoe Andriambaloambitelopolo ny Maroandriana. Nanjaka tao amin' ny lohasaha Fahambahy izy ireo ary i Fanorahana no renivohiny. Avy amin' ny Vazimba teratany nipetraka tao anaty lava-bato izy ireo, izay toerana fialofana tamin' ny fotoan-tsarotra sy fanafihan' ny fahavalo. Ny tena lehibe dia ny any Sahasarotra, 3 km miala ny tanànan' i Fanorahana izay nialokalofan' i Andriambazimbabe mpanorina ilay vondrona, niaraka tamin' ny fianakaviany, ela be talohan' ny nisian' ny rafitra pôlitikan' ny Maroandriana. Nijanona tao nandritra ny taonjato iray izy ireo. Mety ho taranaky ny andevo rômanina sy olona avy any Atsinanana izy ireo (araka ny sora-tanana nataon' i Bira Marc - Boky I). Ao amin' ny nosy Mangabe ao amin' ny helodranon' i Antongila tokoa no ivon' ny vondrona.
Taorian' ny taonjato iray niainany tao amin' ny lava-bato ao Andafatra ao Sahasaritra dia namoaka azy ireo ny mpanazary Rona ary nitondra azy ireo ho any amin' ny lohasaha Vanono izay nananganany tanàna miisa 38 tao amin' ny reniranon' i Fahambahy, izay nahaforona ny Fanjakana Marosaina ahitana fokom-pianakaviana 38. Ny toetran' i Rona dia mahafeno fepetra ho mpanazary: mpaminany na mpanao lalàna, voatsilo avy amin' ny fanambaran-janahary. Sady mpitondra fivavahana no lehibe ara-pôlitika i Rona, izay manazava ny antony tsy nananan' ny Tsimihety mpanjaka. Nandray fanapahan-kevitra ara-pôlitika taorian' ny fifampidinihana nataon' ny filankevitry ny sojabe (loholona). Ny Fanjakana Marosaina naorin' ny mpanazary Rona dia nahitana fahefana iaraha-mitantana, araka ny anarany. Tsy misy fanapahan-kevitra raha tsy mandalo ny filankevitry ny Andriambaloambitelopolo. Ny Andriambaloambitelopolo tsirairay dia miambina sy miantoka ny lalànan' ny hazary 2 ahitana didy folo-karazany (misy andininy folo). Antsoina hoe mpitam-body saina izy ireo eto amin' ny taniny. Isan-taona ny Andriambaloambitelopolo miaraka amin' ny mpanazary dia manomana fety izay ametrahana ny saina, mariky ny fahefana. Azo oharina amin' ny fetin' ny tsangan-tsaina eo anivon' ny Antakarana ity fanao ity. Taorian' i Rona ny mpanazary dia nifandimby tamin' ny maha-filoha faratampony azy ireo, izay ambonin' ny Andriambaloambitelopolo. Mbola mifangaro amin' ny fahefana pôlitika ny fahefana ara-pivavahana. Ny fisafidianana ny lehibe mpanazary dia noho ny fahaizany ara-pôlitika. Eken' ny Andriambaloambitelopolo izay nofidian' ny vahoaka misy azy izy ka misolo tena ny vahoaka manontolo. Amin' ny maha-mpitarika foko azy dia mpitarika ara-panahy sy mpitarika ny tafika ihany koa izy, saingy afaka manolotra ny fahefany amin' ny maha-mpitari-tafika azy amin' izay mpikambana ao amin' ilay foko izay heveriny ho mahavita azy.
Ny ohatra nasehon' ny Fanjakana Tsimihety Manjakamarosaina na Andriambaloambitelopolo dia nahafahana miresaka ny amin' ny endrika repoblikana alohan' ny fotoanany, satria izy io no azo nisafidianana hasolo ny fametrahana fitondrà-mpanjaka. Ary ny rafitra ara-pôlitika toy izany dia voatazona mandra-pahatongan' ny fanjanahan' ny Frantsay an' i Madagasikara, anisan' izany ny fotoana mandritra ny fanjakazakan' ny Merina.
Ny Frantsay dia nampiditra ny Tsimihety tamin' ny taona 1896 ho anisan' i Madagasikara zanatany frantsay. Ny Tsimihety dia anisan' ny nandray anjara mavitrika tamin' ny pôlitika teto Madagasikara hatramin' izay. I Philibert Tsiranana, izay Tsimihety avy any akaikin' i Mandritsara, no filoha voalohan' ny Repoblika Malagasy, fony izy lasa faritra nanana fizajan-tena voafetra tao anatin' ny Vondrona Frantsay (Union Française) tamin' ny taona 1959, ary nijanona ho filoham-pirenena nandritra ny 10 taona taorian' ny nahazoan' i Madagasikara ny fahaleovantenany tamin' i Frantsa tamin' ny taona 1960.
Ny vahoaka tsimihetyHanova
Ny anarana hoe Tsimihety ("tsy manapaka volo") dia avy amin' ny tsy naneken' izy ireo nanao fisaonana an-dRadama I, izay tokony hisian' ny fanapahana ny volon-doha mba ho fisaonana ny mpanjaka maty: tsy anarana avy amin' izy ireo izany, fa avy amin' ny namany roa izay nanome azy ireo oi anarana io, izay nanaiky ny fanapahan' ny mpanjaka merina. Lava volo ny lehilahy sy vehivavy tsimihety, araka ny fomban-drazany tamin' izany, ary nanao randrana koa izy ireo manomboka eo an-tampon-doha ka mitsotsorika manodidina ny lamosina. Amin' ny tarana-mpanjaka Antandroña no nanao izany fihetsika tsy nety nanapaka ny volony izany ka nahazoan' ny Tsimihety ny anarany.
Farafahakeliny filazana telo no fantatra momba ity fihetsika tsy hay hadinoina ity.
ny iray dia mametraka azy io tsy tena mazava amin' ny fotoana antsoina matetika hoe "prôtektôrata merina";
ny faharoa dia mametraka izany tamin' ny nahafatesan' ny mpanjakavavy Ravahiny tao amin' ny Fanjakan' i Boina tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-19;
ary ny fahatelo, izay manantitrantitra fa ny anaran' ny Tsimihety dia nomen' ny Betsimisaraka, dia mametraka izany amin' ny nahafatesan' ny mpanjaka iray tao Boina, amin' ny fotoana izay mety nahatratra ny Antandroña teo anelanelan' ny afo roa: amin' ny lafiny iray, amin' ny andrefana, ny tarana-mpanjaka sakalava tao Boina izay nilaza ho nametraka ny fahefany tamin' izy ireo, ary ny ankilany atsinanana, ny tarana-mpanjaka betsimisaraka an' i Zafirabay izay nitovy tamin' izany koa.
Niorina tamin' ny fomba fiainan' ny mpiombom-panana ary tarihin' ny andiana olon-kendry antsoina hoe sojabe ny Tsimihety, izay tsy mbola nahalala fandaminana ara-pôlitika ho fanjakà-mpanjaka na ho fitondràm-pilohan-tanàna. Efa ela io foko io no nandà ny fahefana noho ny firaiketam-pony amin' ny fahalalahana mivezivezy. Nibodo ny tokonam-baravaran' i Mandritsara, ary nitodika tany atsinanana sy tany amin' ny helodranon' i Antongila tany amin' ny taona 1900 teo ho eo, noho ny fielezan' ny mponina, ka nankany amin' ny lemaka avaratra-andrefana sy any Mahajanga, nanafotra ny Sakalava izay efa nihena hery. Mahay manao tavy sy koa manao tanimbary maharitra na fiompiana omby koa ny Tsimihety izay foko tanindrana voalohany natoky ny sekolin' ny Frantsay tamin' ny fanofanana ireo sangany vaovao. Izy ireo araka izany no foko nisy solontena tsara indrindra tao amin' ny sekolim-paritr' Analalava tamin' ny taona 1932. Tamin' izany fotoana izany, dia izy ireo hatrany no mpanao fihetsiketsehana mpanohitra izay nanome olona itokisana an' i Jean Ralaimongo, rain' ny fitiavan-tanindrazana malagasy, voadidy honina an-trano tsy mahazo mihetsika tao Port-Bergé. Taorian' ny taona 1945 dia nahatakatra ny tombontsoan' ny firaisankina amin' ny Tsimihety, ny Frantsay, noho ny Tsimihety "mpampiray ny vahoaka" mahay, izay noheverina koa ho "repoblikana" noho ny fandavany faharazana ny fitondran' andriamanjaka.
I David Graeber, antrôpôlôga manampahaizana manokana amin' ny fandalinana ny rafitra anarsista, dia nilaza fa ny Tsimihety dia maneho rafitra ara-tsôsialy ara-tantara izay tsy nanaiky fahefana ary nanao fanjakan' i Baroa: Izy [Tsimihety] dia voamariky ny fandaminam-piarahamonina sy fanao mandala ny fitoviana tanteraka. Izy ireo, amin' ny teny hafa, dia ireo anarsista any avaratra-andrefana amin' i Madagasikara. Malaza ho mpandosirana izy ireo hatramin’ izao: teo ambany fahefan' ny Frantsay, nitaraina ny mpitantana fa afaka mandefa delegasiona izy ireo handamina ny asa fanamboarana lalana akaikin' ny tanànan' i Tsimihety, hifampiraharaha amin' ireo loholona toa mankasitraka fiaraha-miasa, ary hiverina miaraka amin' ny fitaovana iray herinandro taty aoriana nefa nahita ny tanàna nilaozana tanteraka – ny mponina tsirairay dia nifindra niaraka tamin' ny havana sasany tany amin' ny faritra hafa ao amin' ilay firenena".
Ny Tsimihety dia iray amin' ireo ohatra tsy fahita firy izay nahitana kolontsaina manohitra tanteraka ny fisian' ny fitondrana, izay nambaran' i Graeber, fa nanaisotra ny endrika fitondrana rehetra na dia tany ambanivohitra sy tamin' ny vondrom-piarahamonina aza. Ny marimaritra iraisana no fototry ny fanapahan-kevitra, izay rehetra miseho ho mpitondra dia nampiahiahy, tsy mety ny manome baiko, tsy mety ny manantena olona ho tompon' andraikitra na tena hanao zavatra, ary na ny hevitra toy ny hoe miasa hahazoan-karama aza dia nolavin' ny saina. Nambaran' i Graeber fa tamin' ny farany dia natelin' ny Fanjakana ny Tsimihety, ka nandao ny nofinofiny, satria nitady fahafahana ara-toekarena sy ara-potodrafitrasa.
Rafi-pianakaviana entin-dray ny an' ny Tsimihety, ary ny fifandraisana eo amin' ny razambe lahy sy ny taranany no zava-dehibe indrindra amin' ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny fifanarahana ara-kolontsainan' izy ireo dia mitaky fanambadiana olona avy ivelan' ny fianakaviana, izay, miaraka amin' ny taham-pahaterahana amboony dia ambony, nitarika ny fifindra-monina sy ny fiparitahany tamin' ireo foko manodidina. Miavaka koa ny fiarahamonina tsimihety noho ny andraikitra ara-tsôsialy andrasan' ny fianakaviana amin' ny anadahin-dreny.
Ny fitenin' ny Tsimihety dia fitenim-paritra amin' ny teny malagasy, sampan' ny vondrom-piteny malaiô-pôlineziana avy amin' ny fiteny baritô any amin' ny faritra aostrôneziana.
Ny fiaraha-monina sy ny toekarena tsimihety, toy ny any amin' ny ankamaroan' ny faritra eto Madagasikara, dia miompana amin' ny fambolena. Ny vary no foto-tsakafo, ary ny Tsimihety dia miompy omby. Anisan' ny fady amin' ny Tsimihety ny fiasana tany amin' ny andro Talata. Ny renivohitra ara-toekarena eo amin' ny Tsimihety dia i Mandritsara.
Alphonse Tsimilaza, Phonologie et morphologie du Tsimihety . Université de Nancy 2, 1981 (thèse doctorat de 3ème cycle)
André Dandouau, "Chansons tsimihety", in Bulletin de l'académie malgache, Vol. X, 2e partie, 1912, 101 p.
André Dandouau, "Énigmes et devinettes sakalava et tsimihety (Madagascar)", in Revue d'ethnographie et des traditions populaires (Paris), 6 (21), 1925, p. 1-26
André Dandouau, "Ody et fanafody (charmes et remèdes) : pharmacopée Sakalave et Tsimihety", in Revue d'ethnographie et des traditions populaires (Paris), no 10-11, 1922, 45 p.
Bira (Marc), Jao Mpanazary tsimihety, 1953, imprimerie Marivolanitra.
Bira (Marc), Ny Foko tsimihety na ny Andriambaloambitelopolo ato Androna, Livre II, inédit, 1969.
J. F. Rabedimy, "Réflexions sur les anciens systèmes politiques tsimihety : l'art du Manjakamarosaina ou des Andriambaloambitelopolo", in Omaly sy anio (Antanarivo), no 17-18-19-20, 1983-1984, p. 157-161
Peter J. Wilson, Freedom by a hair's breadth : Tsimihety in Madagascar, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1992, 179 p. (ISBN 0-472-10389-X)
Raymond Decary, "Notes ethnographiques sur les populations du district de Maromandia (Sakalava et Tsimihety)", in Revue d'ethnographie et des traditions populaires (Paris), 5 (20), 1924, p. 343-367
↑ Bira (Marc), Ny Foko tsimihety na ny Andriambaloambitelopolo ato Androna, Livre II, inédit, 1969.
↑ Ity ilay tsongan-dahatsoratra nadika "They [Tsimihety] are marked by resolutely egalitarian social organization and practices. They are, in other words, the anarchists of northwest Madagascar. To this day they have maintained a reputation as masters of evasion: under the French, administrators would complain that they could send delegations to arrange for labor to build a road near a Tsimihety village, negotiate the terms with apparently cooperative elders, and return with the equipment a week later only to discover the village entirely abandoned – every single inhabitant had moved in with some relative in another part of the country." (Graeber, David (2004). Fragments of an Anarchist Anthropology. Dubois Publishers. ISBN 978-0-9728196-4-0.)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsimihety&oldid=1043715"
Dernière modification le 9 Febroary 2022, à 08:03